Hay'adda WFP oo sheegtay inay Magaalada Baladweyne ka furaneyso Xafiiska ugu weyn Howlgalkeeda Gobalada dhexe
Hay'adda WFP oo sheegtay inay Magaalada Baladweyne ka furaneyso Xafiiska ugu weyn Howlgalkeeda Gobalada dhexe.
Ilaa 7 xubnood oo isugu jira saraakiil Somali iyo ajnabi kana socday Hay,ada WFP ayaa manta gaaray magaalada Baladweyne ee xaruunta Gobalka Hiiraan.
Mr.Yusea oo dhalashadiisu ay tahay dalka Japan ayaa sidoo kale sheegay in todobaadka soo socda uu Gobalka Hiiraan imaandoon Safiirka Japan ee Magalada Nairobi si uu qiimeyn ugu sameyo xaalada nolosha ee dadka Gobalka Hiiraan.
Maamulka Gobalka Hiiraan oo kulanka kala qeybgalay Saraakiisha WFP iyo Hay,adaha Madaniga ee Magaalada Baladweyne ayaa goobtu waxaa uu ka sheegay in amniga magaalada uu suganyahay isla markaana laysku haleen karo nabadgalyada dgaanada ay gacanta ku hayaan maamulka.
Waa markii sadaxaad oo masuuliyiinta ka socota laamaha QM ay yimaadaan Magaalada Baladweyne Mudo 4 bilood gudahooda, islamarkaana balamo aan waxba ka fulin ay dadka magaalada u sameeyaan.